[OFFICIAL] iOS Data ndabere & Weghachi - Nhọrọ ndabere & Weghachi iOS Data
Ndabere data DataKit iOS & Weghachi
Otu Pịa ka ndabere data sitere na ngwaọrụ iOS (iPhone / iPad / iPod) ka Windows na Mac.
Otu Pịa ka Weghachi data ndabere na ngwaọrụ iOS ma ọ bụ Windows na Mac.
Detuo ndabere ya na paswọọdụ iji chedo data gị.
Lelee ma ọ bụ bupụ data ndabere gị na Windows na Mac.
Ndabere iPhone / iPad / iPod Data ka PC / Mac
You nwere ike ndabere iPhone, iPad, iPod Data (Lelee Kedu data ị nwere ike ndabere) na Windows na Mac nwere Otu Pịa. Ozugbo i jikọtara ngwaọrụ iOS gị na kọmpụta, mmemme ahụ ga - achọpụta ngwaọrụ gị wee dịrị njikere ịme nkwado ndabere maka gị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ idobe ndabere gị, ịnwere ike izochie ndabere gị na paswọọdụ setịpụrụ. Kedu ihe ọzọ, ị nwere ike ịlele data ndabere niile na Windows na Mac oge ọ bụla. Ihe ndabere ị na-eme agaghị edochi nke mbụ.
Tụlee iTunes na iCloud
PC / Mac dị gị mkpa
Lelee data ndabere
Weghachi data iOS Ngwaọrụ / Kọmputa (Windows / Mac OS)
Inwere ike ịhọrọ nkwado ndabere ọ bụla i mere maka mweghachi, ị nwere ike ịhọrọ data ndị ịchọrọ iweghachi, enwere ike ihuchalu data niile tupu ịmaliteghachi.
Can nwere ike iweghachi data niile (Lelee data ị nwere ike iweghachi) itinye aka na nkwado Windows na Mac, maka iweghachi na Ngwaọrụ iOS, ịnwere ike iweghachi kọntaktị na ndetu (a ga-akwado ụdị faịlụ ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso). Ọ gaghị edegharị data na Ngwaọrụ iOS gị.
Data Nkwado maka ndabere na weghachi
Datadị data akwadoro
Ndabere iOS Data
• Ndi ana-akpo • Ozi • Ozi akuko • Ndetu • Foto • Kalinda • Ncheta • Ozi olu • WhatsApp & mgbakwunye • Ihe ncheta olu • ibe edokọbara Safari • Akụkọ njem Safari • Foto ngwa • Vidiyo ngwa • audio ngwa • akwụkwọ ngwa • akwụkwọ ngwa.
Weghachite data na Ngwaọrụ iOS
• Ndi ana-akpo • Ndetu
* ụdị data ndị ọzọ ga-akwado n'oge na-adịghị anya
Weghachi data na Windows / Mac
• Ndi ana-akpo • Ozi • Ozi akuko • Ndetu • Foto • Kalinda • Ncheta • Ozi olu • WhatsApp & mgbakwunye • Ihe ncheta olu • ibe edokọbara Safari • Akụkọ njem Safari • Foto ngwa • Vidiyo ngwa • audio ngwa • audio ngwa • Akwụkwọ ngwa.
Nhọrọ kachasị mma na iTunes maka ndabere & Weghachi iOS Ngwaọrụ
Budata Nkwado iOS Data & Weghachi Ugbu a!
Enwere m ọrịa iTunes n'ezie, ọ bụ antihuman na enweghị ọgụgụ isi. Mgbe m hụrụ ngwa a, ahụrụ m ihe bụ teknụzụ na-akwalite mmepe nke ike ndị na-arụpụta ihe.
Na iOS ndabere & Weghachi M ndabere foto na iPhone m na Mac Bookpro oge niile. Ọ bụ turly mfe iji na aka.
Ihe masịrị m bụ na ị nwere ike ihuchalu data niile na faịlụ ndabere, kọntaktị, foto, akụkọ ihe mere eme, ndetu, kalenda, ederede ederede, wdg.
Xzọ 4 Otu esi ahazi kọntaktị na iPhone
Esi ndabere iPhone na Mac - Ndabere Ndi ana-akpo, SMS, Kpọọ & ọzọ
Etu esi echere ndabere? Hacks 3 I Kwesịrị Knowmara
Esi ndabere iPhone ka Kọmputa
Esi ndabere iPhone enweghị iTunes
Etu esi echere foto iPhone (February 2018)
Naghachi kọntaktị gam akporo / kọntaktị gam akporo, ozi, foto, ọdịyo, vidiyo, ozi WhatsApp na ndị ọzọ site na ekwentị Ekwentị, Error OS ma ọ bụ ndị ọzọ.